Haddii fadhiga barlamaanku si wadajir ah u qabsoomo waa guul u soo hoyatay Reer Baydhabo
Buluugleey February 20, 2006
Xubnaha labada gole ee Dowlada KMG ee ku sugan Jowhar oo uu hoggaminaya Col. C/laahi Yuusuf, Porofesoor Geedi ayaa la filayaa inay u kicitimaan magaalada Baydhabo maalmaha inagu soo aadan si ay uga qeyb galaan fhadhiga dowlada KMG ee in mudo ahba xurguf siyaasadeed ay ka dhaxeysay. Fadhigaas ayaa la saadaalinayaa inay xubnaha barlaamaanka intooda badan ay ka soo wada qeybgalaan.
Waxaase weli kalacadeyn in hogaamiyayaasha hubeysan ee ka tirsan dowlada KMG ay la imaan doonaan malleeshiyadooda u qaabilsan amaankooda. Dhanka kale ayaa wararku sheegayaan in Col. Cabdulalhi Yusuf ka wadan toono magaalada Jowhar ciidan uu ku kalsoonyaay oo amaankiisa suga, in kasata oo Baydhabo tahay magaalo looga diyaargaroobay amaanka wafdiyadan ku soo fool leh.
Baydhabo oo ah meel istiraatijiyad muhiim ah kana jirtey dagaallo ayaa waxaa horey loo qondeeyay in malleeshiyada kala duwan ee sida aadka u hubeysan in la geeyo xeroonyin gaar ah, laakinse ilaa hadda ayaa malleeshiyadu weli ku sugantahay gudaha magaalada.
Hoggamiyayaalka ka soo jeedo gobolka Bay ayaa rumeysan in fadhiga barlamaanka dowlada KMG haduu sida loogu talagalay u qabsoomo, taasi waxay noqon doontaa guul u soo hoyato dadka reer Beydhabo, taasina waxay u suurta gelin doontaa awood siyaasadeed ee ay ku saleysan nabadeynta qaranka Soomaaliyeed. Nabadeynta ka curandoonto magaalada Baydhabo ayaa dad badani rumeysanyihiin in hogamiyayaalka kale ee weli ku xoogsada qoriga karkaarada weydaarin doonto.
Kulanka Barlamaanka ee muddo dhow laga qorsheeyey in lagu qabto magaalada Baydhabo ayaa ah mid la filayo inay ku kulmaan labada garab ee kala taabacsan Muqdiisho iyo Jowhar ,waxaana la filayaa inay garabyada dowladda KMG ee la yimaadaan siyaasad weji cusub leh ee si aad ah uga duwan tii hore.